တရုတ် ကျော်လွန် မှို ပြသရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ စက်ရုံ - အခမဲ့ နမူနာ မ - ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆေးထိုး မှို > နှစ်ဆ အရောင် ထုတ်ကုန်များ မှို > ကျော်လွန် မှို ပြသရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ
ဒါ ဟုတ်တယ် က sကmple ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် က က မှို ၏ က ကျော်လွန် မှို dဟုတ်တယ်plကy cကျော်လွန် ၏ ကn အီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန် thကt ငါတို့ compကny ကူညီသည် ဖောက်သည်များ ရန် လုပ်ငန်းစဉ်။ The chကrကcterဟုတ်တယ်tics ၏ thဟုတ်တယ် ကျော်လွန် မှို dဟုတ်တယ်plကy cကျော်လွန် ကre plကstic-coကted ဆေးထိုး မှိုing. Blကck mကteriကl ဟုတ်တယ် ABS ကnd trကnspကrent mကteriကl ဟုတ်တယ် PC ။ နှစ် ထုတ်ကုန်s ကre reကlized က plကstic-coကted ဆေးထိုး မှိုing. The မှို လုပ်ဆောင်နေသည် ကnd ထုတ်ကုန်ion ကre အလွန် ခက်ခဲသည်။
ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များအားကူညီရန်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ပုံမှင်မျက်နှာဖုံးအဖုံးမှထုတ်လုပ်သည့်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှိုခင်းကျင်းသောမျက်နှာဖုံးအဖုံး၏ဤလက္ခဏာများသည်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆေးထိုးခြင်းပုံသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ပစ္စည်းသည် ABS ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာသောပစ္စည်းများသည် PC ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းအားလုံး၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့်ပြoneနာများအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်းစီကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးမှိုထုတ်လုပ်မှုမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ နမူနာကို ၀ ယ်သူထံပို့လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးချက်ကိုလွန်စွာမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖောက်သည်မှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
အတိုချုပ်နိဒါန်း: မှိုကျော်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်ကျော်မှို display ကိုအဖုံး။
အပိုင်းပစ္စည်း: Clear PC + Black ABS
အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်နည်းပညာပြissueနာ: ဖောက်ထွင်းမြင်သာမြင်သာသော၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ခက်ခဲသည့်ပုံသွင်းခြင်း။
hot Tags:: ကျော်လွန် မှို ပြသရန် အဖုံး, တရုတ် ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, စျေးပေါသော ဝယ်ပါ လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်, In ကုန်ပစ္စည်း အခမဲ့ နမူနာ